Umhla My Pet » Ukuthandana intanethi Ukufumana phantsi?
ukubuyekezwa: Nov. 19 2020 | 3 min ukufunda
Uyazi njani xa uye wathumela nje ukuba kwekhulu e-mail iphendulwe, loo ndoda intle / mfazi beringa ukuba wajika ukuba atshatiselwe, ukuba omnye oyithandileyo ngenene iye yaphela ngaphandle kwelizwi kunye mntu wadibana kwiveki yokugqibela esimele ukuba ngeposi umfanekiso ukuba ubuncinane iminyaka elishumi ubudala kuba engazange khangela nto injengaleyo ngenyama! Kunokuba intle akunakukudimaza.
Yinto ukuba kuwe kuthetha ukuthini ukuba snobby, yaye inyaniso kusuke kuvakale ngathi wonke umntu odibana Intanethi mhlawumbi udlala imidlalo, efuna ngesondo, amqumbele sinochuku emagxeni abo malunga ex yabo, iye utshayiswe le ntonga ugly uze ifoto-aboniswa imifanekiso yabo uzenze zibonakale imodeli okanye nje zepistasi okungenanto! Ukuba izandi engqwabalala oko awenzelwa ukuba, kwaye ngokwenene kusuke kuvakale ukuba ngamanye ehlabathini ukuthandana online. Ingakumbi xa ufumana nokuva! Okubuhlungu kukuba konke oku kungenza uzive udiniwe, sicaphuke satshiswa. Kwezinye iimeko mhlawumbi nokuba kukwenza bayithandabuze ingaba kukho ubani apha phandle kuni!
Kwi meko imbi ndiyazi abantu ukuba siyifake ngetawuli ngokupheleleyo, ngokuvakalisa ukuba ukuthandana online ayisebenzi, okanye ukuba nje weirdos, okanye nantoni na uguqulelo lwe ibali uzixelela. Khangela andiyi ndiyithethayo kungavakali kakubi xa kubonakala ukuba ukuphoxeka omnye emva komnye, Kodwa yintoni angawenza umahluko apha utshintsho oluncinci nembono – nje 'ukutsala kabukhali' omncinane ngelensi apho ujonga ukuthandana online.
Yintoni ekufuneka uyikhumbule apha kukuba ukuthandana online ivula 'kwimarike ekujoliswe' yakho, ithetha ukuba i enkulu kakhulu kunokuba bekuya kuba umva ukuthandana xa ukuba kuqhubeka phakathi nje amadoda amanenekazi ukusuka kwindawo ezingqongileyo yengingqi yakho. Kwaye oku kuthetha ukuba uza kudibana zonke iintlobo ezahlukeneyo zabantu. Asingabo bonke bephela baya kuba nobubele bakho abantu, kwaye uya kusoloko kuba zezabo nokuba. Oku kusebenza kuwe kungakhathaliseki ukuba mnandi kuwe nokuba yimalini ayigange nibe. Kwihlabathi ukuthandana online ayenzi mahluko kakhulu, kukho nje imali ethile 'ezirhabaxa bokomisa'. Kwaye mhlawumbi 'umqulu' athile abantu kusenokwenzeka ukuba zihlangane phambi okunene udibana 'umntu', (ngaphandle kokuba unethamsanqa kakhulu). Kwaye ukhumbule ukuba yintoni na trash ngumntu omnye bubuncwane somnye. Le ngxaki ivela xa sithatha yonke into ngokobuqu.
USinxo uyikhumbule kukuba xa sasidla ga ngendlela endala lixesha, kukuthi intlanganiso abantu ubuso ngobuso, sidla kukwazi kancinci ngazo kuqala, nokuba oko kuphela oko okunene zijongeka njani ubomi benene. Kodwa ukuthandana intanethi musa, ngoko uza kuza liphela amaqashiso abantu ukuba ibingayi bakhetha mhla ukuba uye wadibana nabo buqu. Nkqu profiles ukufunda akayi kukunika ingcamango kakhulu, kuba emva kokuba zonke, abantu elakhe icala zazo ezigqwesileyo kuphela kwiprofayile yabo. Makhe sinyaniseke, kungenakwenzeka ukuba umntu ukubhala 'njalane, narcissist lokuzingca kunye ungqinisiso noboya ukuhla kancinci ufuna umfazi nice ukupheka iidinala zakhe kuye '.
Ngoko ke ndawopni ekhosini uya sidibana abanye abantu ukuba ukhetha ukuphepha isibetho ezifana. Abanye ukuba nje abanamdla. Abanye abayi kuba unomdla kuwe. Abanye uya kubonakala abanomdla uze shwaka. Ukuba singayamkela inyaniso yokuba yonke le yi nxalenye yobomi ukuthandana intanethi ke uya kuhlelwa ngcono kakhulu. Ngaloo ndlela unako ndincume ngokulula, kuhleka wena uthi 'ESILANDELAYO'. Ke ilunge umva ehasheni.
Musa betyhafiswa. Yenza olu kabukhali omncinane enye isimo sakho malunga ukuthandana online, uze uphume khona apho uzonwabise kokunxibelelana ngezininzi zabantu ezahlukeneyo. ncokola, ngudlalani, ukuya eminye imihla, Zonwabele, kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi yakho 'umntu' ngeenxa nje ikona elilandelayo.